I-PFS Inkukhu yePox Pox Intenuated China Manufacturer
I-Gelatin Iimveliso zeZibalo zeMpilo,I-Gelatin Iimveliso ezigqityiweyo zonyango,I-Gelatin I-Health Titer Health
Changchun BCHT Biotechnology Co. [Jilin,China] Uhlobo lo shishino: Manufacturer Main Mark: Asia Ngaphandle: 1% - 10% ICredit: GMP Inkcazo: I-Gelatin Iimveliso zeZibalo zeMpilo,I-Gelatin Iimveliso ezigqityiweyo zonyango,I-Gelatin I-Health Titer Health
Home > Imveliso > I-Varicella Vaccine (Live) > Iimveliso ezigqityiweyo > I-PFS Inkukhu yePox Pox Intenuated
 I-PFS Inkukhu yePox Pox Intenuated
UMbutho WezeMpilo Wehlabathi ucebisa isisindo esisodwa okanye amabini ngeqondo lokuqala elinikwe kwiinyanga ezili-12 ukuya kwezi-18 ubudala. Inqanaba lesibini xa linikwe kufuneka lenzeke ubuncinane kwiinyanga ezintathu ukuya kwezi ezintathu. Olu gonyo luphetshana olunikezelwa ngaphantsi (phantsi kwesikhumba). Kunconywa kubo bonke abantwana abangaphantsi kwe-13 kunye nabo bonke abantu abangama-13 okanye ngaphezulu abangakaze babe ne-inkukhu.
E-United States amabini amanyathelo ayanconywa. Kwimeko yokuqala umthamo wokuqala ulawulwa kwiinyanga ezili-12 ukuya kwezi-15 kunye neyesibili yesibini kwiminyaka engama-4-6. Kubantu abaneminyaka engaphezu kwe-13 loo milinganiselo emibini ilawulwa ngeeveki ezi-4 ukuya kwezi-8. I-vaccine ye-varicella ayizange ibe khona ngokubanzi kwi-United States kude kube ngo-1995.
E-UK, ugonyamelo lukhuthazwa kuphela kubantu abachaphazelekayo kwinkukhu.
Related Products List: I-Gelatin Iimveliso zeZibalo zeMpilo , I-Gelatin Iimveliso ezigqityiweyo zonyango , I-Gelatin I-Health Titer Health , Iimveliso zeMpilo zeMpilo , I-Gelatin Iimveliso zeeMveliso eziVimbelayo , I-Gelatin Iimveliso ezizimeleyo ezikhuselweyo , Iimveliso zeeMveliso zeMpilo , Iimveliso eziQinisekileyo zeMpilo